DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA ACER ASPIRE 5742G - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Ịmepụta ihe oyiyi nke uwe ọhụrụ na-eme ugbu a na mmemme pụrụ iche. Ha na-enye ngwaọrụ na atụmatụ dị mkpa. Ụfọdụ na-elekwasị anya na ha na ndị ọkachamara na-arụkọ ọrụ, ebe ndị ọzọ na-eru ndị na-ege ntị. N'isiokwu a, anyị weere ọtụtụ ndị nnọchiteanya nke software a. Ka anyị leruo ha anya.
"Grace" achọkọtara onwe ya ọ bụghị naanị onye nchịkọta akụkọ, mana ọtụtụ ntinye dị iche iche. Dịka ọmụmaatụ, mmepụta ma ọ bụ nhazi usoro dị n'ime ya, mana ngwaọrụ ndị a na-emepe mgbe ịzụrụ mbipute zuru ezu. Na ikpe ị nwere ike ime nanị imewe, imewe na ịme ihe.
A na-arụ ọrụ site na ọkachamara. Onye ọrụ a chọrọ ka akara akara ndị dị mkpa ma gbanwee n'etiti windo. Mgbe e kere eke, nchịkọta akụkọ ahụ ga-amalite, ebe a na-achịkwa algorithm. Na mgbakwunye na ngwá ọrụ ọkọlọtọ nwere ọtụtụ ndị ọrụ, a na-agbakwụnye ha site na iche iche menu.
Leko na-enye ọtụtụ ụdị ọrụ, onye ọ bụla n'ime ha nwekwara ọrụ pụrụ iche na ngwaọrụ. Nke mbụ, a na-ahọrọ ụdị atụmatụ mbụ, ụdị nke nlereanya ahụ egosiri, mgbe e mesịrị, a na-emepụta ụkpụrụ na edetu editọ ka ọ rụọ ọrụ ndị bụ isi.
Onye ọrụ ahụ nwere ohere iji nhazi ederede zuru oke, njikwa algorithm, usoro ojiji nke ihe ngosi. Ogologo nwere ike iyi ihe siri ike maka onye mbido, ma usoro a zuru ezu na Russian, nke ga-enyere gị aka ịmalite ngwa ngwa. A na-ekesa Leko n'efu na enwere ike ibudata ya na saịtị ọrụ.
Ugbu a, tụlee onye nnọchianya ahụ, nke kachasị mma maka ịmalite. Na RedCafe enweghị ọtụtụ ọrụ, ọ bụ naanị ihe kachasị mkpa maka imewe, na interface dị na ụzọ kachasị mfe ma dị mfe. A na-etinyekwa nchịkọta akụkọ ahụ n'ụzọ dị nnọọ mfe, ọ nwere nanị ole na ole n'ime ngwaọrụ kachasị mkpa.
A na-akwụ ụgwọ na usoro ihe omume ahụ na nkwekọrịta siri ike nke nsụgharị free. Ndị nwe ya enweghị ike ịzọpụta ọrụ ma zipụ ha ka ha bipụta. Ụzọ a chọrọ ndị mmepe iji saịtị na-edebe ma na-ebipụta site na akaụntụ onye ọrụ.
Ndị nwe ọnụ na-egbu egbu Silhouette Cameo, anyị na-akwado iji usoro mmemme nke ndị mmepe, nke dịkwa mma maka ịkpụzi uwe. Enwere ọtụtụ ndebiri na blanks n'efu, nakwa dịka nchịkọta dị mfe n'ime ebe a na-ekepụta ihe.
Silhouette Studio dị mma naanị maka ndị nwe ụlọ na-egbu ihe, n'ihi na ọ gaghị ekwe omume ịchekwa ọrụ ahụ na nhazi oyiyi ma ọ bụ zipu ya ozugbo iji bipụta. Ya mere, a ga-eji ihe ngwaọrụ ahụ mechie.
Ihe kachasị ọhụrụ na ndepụta anyị bụ usoro PatternViewer. Ọrụ ya na-elekwasị anya n'ichepụta uwe maka ndebiri njikere. Na mbipụta ikpe ahụ enwere ole na ole, ma nke a zuru ezu maka nyochaa. A ga-emeghe ohere ọ bụla mgbe ịzụtara ọzọ nkeji.
Ndị a abụghị mmemme niile na-enyere aka nhazi nke uwe. Na Intanet, e nwere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ha. Anyị gbalịrị ịhọrọ ndị nnọchiteanya kachasị mma na ọrụ na ngwaọrụ ha pụrụ iche.
Hụkwa: Mmemme maka usoro ihe owuwu